SGHYZ alloy electrothermal heerkulka sare
Daawaha korantada ee heerkulka sare
HRE silig kululaynta iska caabinta
Shirkadeenu waxay leedahay taariikh ka badan 60 sano soo saarista birta aan lahayn. Adoo dooranaya alaab ceyriin oo tayo sare leh iyo qaadashada habsami u socodka foornada saddex waji elektaroonigga ah + foornada hal weji ah el foornada faaruqinta ah . Taxanaha siligga Bar iyo silsiladda qashinka ayaa la bixin doonaa.
Birta birta ah iyo alaabteeda waxay ka tirsan yihiin qalab cusub oo shaqeynaya dhowaan. Fibreerka waxaa lagu gartaa aag ballaaran oo dusha sare leh, kala-baxa kuleylka sare, hagida korantada oo wanaagsan, dabacsanaan fiican, u adkaysiga qandhada qandhada heerkulka sare iyo u adkaysiga daxalka.
Silig kululaynta iska caabinta HRE waxaa loo isticmaalaa foornada heerkulka sare. Astaamaheeda waa: iska caabinta heerkulka sare, nolosha shaqeynta dheer, iska caabinta qiiqa wanaagsan, isku xirnaanta heerkulka qolka, awooda habsami u socodka, dib ugu noqoshada dabacsanaanta yar, iyo wax qabadkeeda wax qabadku way ka fiican tahay 0Cr27Al7Mo2 iyo waxqabadka heerkulka sare ayaa ka dhib badan 0Cr21Al6Nb, isticmaalka heerkulka ayaa dib u soo celin kara 1400 ℃.
Badeecadani waxay ka samaysan tahay macmiil la safeeyey oo tiknoolajiyad bir ah lagu farsameeyey. Waxaa soo saarey habka qabow ee gaarka ah iyo habka daaweynta kuleylka. Daawaha heerkulka sare ee kululeeyaha korontada wuxuu leeyahay iska caabin qiiqa qumman, heerkulka sare u adkaysiga daxalka, gurguurta yar, nolosha adeega dheer iyo isbadalka iska caabinta yar.
Badeecada SGHYZ waa shey cusub oo la soo saaray HRE kadib kaas oo si weyn loogu isticmaalay qalabka isku darsama korantada heerkulka sare sanadihii la soo dhaafay. Marka la barbardhigo HRE, wax soo saarka SGHYZ wuxuu leeyahay nadiif saa'id ah iyo adkeysi qiijiid wanaagsan. Iyada oo isku-darka unugyada dhifka ah ee gaarka loo leeyahay iyo habka wax soo saarka birta u gaarka ah, maaddada ayaa loo aqoonsaday macaamiisha gudaha iyo kuwa ajaanibta ah ee duurka heerkulka sare ee fiber-kuleylka u adkaysta.
Daawooyinka Fe-Cr-Al waa mid ka mid ah aaladaha korontada ku shaqeeya ee sida weyn loo isticmaalo gudaha iyo dibaddaba. Waxaa lagu gartaa adkaysi sare, isugeyn heerkulka yar oo iska caabin ah, u adkaysi fiiqista wanaagsan, heerkulka sare iyo wixii la mid ah. Alloysyadan ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa sameynta qalabka kululaynta warshadaha iyo qalabka kululaynta guryaha.
SPARK muusig silig ah
Spark "siligga muquuninta sumadda leh ayaa caan ku ah dalka oo dhan. Waxay u isticmaashaa fiilooyin tayo sare leh Fe-Cr-Al iyo Ni-Cr-Al oo ah alaab ceeriin ah waxayna qaadataa mashiinka mashiinka xawaaraha sare ku shaqeeya oo xawaare sare leh oo leh awoodda koontaroolka kumbuyuutarka. alaabtu waxay leeyihiin iska caabin heerkul sarreeya, kor u kaca heerkulka degdegga ah, nolosha adeegga muddada dheer, iska caabbinta xasilloon, qaladka awoodda wax soo saarka yar, leexinta awoodda yar, isbarbar dhigga dhererka ka dib, iyo dusha siman
EMC Xaaladaha Ceeji Wadajirka ah
Noocyada Wadajirka ah ee Cunnada (CMC) waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo EMI iyada oo la adeegsanayo baahinta ballaaran ee qalabka elektarooniga ah iyo faragelinta elektromagnetic (EMI) ee shabakadda korantada.
Maalmahan, kuleyliyeyaasha wax soo saarka iyo makiinadaha wax lagu karsado ee dhaqanka ayaa noqday kuleyliye koronto ugu weyn jikada. Kuleylka induction si joogto ah ugama shaqeyn karaan xaaladda dabka yar, kaas oo hirarka elektromagnetic-ka ee waxyeellada u leh dadka loo shubo. tamarta. Si loo buuxiyo maqnaanshaha makiinadda wax karinta, badeecad cusub oo wax lagu kariyo oo loogu talagalay saxmooyinka kulul ee muraayadda sare leh ayaa laga sameeyay gudaha iyo dibedda.
Fe-Cr-Al dhuuban ballaaran oo ay soo saartay shirkadeena, oo ku saabsan xulashada dhalaalida alloy, waxaa laga sameeyaa alaab ceeriin tayo sare leh sida ferrite, ferrochrome, aluminium ingot, waxaa lagu dhalaaliyaa dhalaalka labada koronto ee elektaroonigga ah. ee ka kooban kiimikada, iyada oo loo sii kordhinayo walxaha Thulium, adkeysiga oksaydhka iyo cimriga nolosha ee isku-darka ayaa si weyn loo hagaajiyay.
Astaamaha loo yaqaan 'Locomotive Braking Resistance brand' waxaa loo isticmaalaa qalabka wax lagu xiro ee loo yaqaan 'braking resistors' qalabka ugu muhiimsan ee tareennada korantada, tareennada naaftada ah, tareennada dhulka hoostiisa mara, tareennada xawaaraha sare ku socda; Calaamaduhuna waxay leeyihiin astaamo dhammaystiran oo leh adkeysi xasiloon oo deggan, dusha sare ee qiiqa oksaydhka, u adkaysiga u daxalka; anti-gariirka ka fiican, u adkaysi-gurguurta heerkulka sare ayaa si fiican u dabooli kara baahida korantada tareenka korantada Resistor.
Daawada 'Invar 36 alloy', oo sidoo kale loo yaqaan 'invar alloy', ayaa loo isticmaalaa deegaanka u baahan isuduwaha aad u hooseeya ee ballaarinta. Barta curiyaha ee isku-darka ayaa ah qiyaastii 230 ℃, oo ka hooseysa taas oo ay daawaha u tahay ferromagnetic isla markaana isweydaarsiga ballaarinta uu aad u hooseeyo. Marka heerkulku ka sarreeyo heerkulkan, daawaha ma leh magnetism iyo isku-dheellitirka ballaadhinta ayaa kordha. Daawaha waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha waxsoosaarka oo leh qiyaasta joogtada ah ee kala duwanaanta heerkulka, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa raadiyaha, qalabka saxda, qalabka iyo warshadaha kale.
Silig kululaynta korontada, Silig iska caabinta korontada, Heerkulka High silig koronto, Silig koronto oo adkaysi u leh, Fiilooyinka kululeeyaha korontada, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha,